ko htike's prosaic collection: ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်က လူမဆန်တဲ့ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရက်စက်မူ
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်က လူမဆန်တဲ့ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရက်စက်မူ
ကျွန်တော်သည် မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီး၊ ယခု အချိန်အထိ လူ တစ်ဦးတစ်ယောက်အပေါ်မှာမှ ရက်စက်စွာ ပြုမူခဲ့ခြင်း မရှိပါ။ ဘုရား၊ တရားနှင့် သံဃာတော်များကို ရိုသေကိုင်းရှိုင်းသူ တစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ တခါတရံတွင် မိမ်ိအကျိုး အတွက် လိမ်လည်တတ်သူ တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါသည်။ ဤစကားများသည် မှန်ကန်သော သစ္စာစကားများ ဖြစ်ပါသည်။ ဤမှန်ကန်သော သစ္စာ စကားများကြောင့် ....
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အောက်ပါ သတင်း ကဲ့သို့ လူမဆန်စွာ ပြုကျင့်နေကြသော စစ်ကြောရေးဝန်ထမ်းများ၊ ရဲဝန်ထမ်းများ၊ စစ်သားများ၊ တရားရေးဝန်ထမ်းများ၊ ထောင်ဝန်ထမ်းများနှင့် အစိုးရဝန်ထမ်းများ အားလုံး နောင် ဘဝ မကူးခင် ယခု ဘဝတွင် အသေဆိုးနှင့် သေကြပါစေ။
ဆွေ ခုနှစ်ဆက်၊ မျိုး ခုနှစ်ဆက် လူစဉ်မမီသော ဘဝမျိုးနှင့် နေကြရပါစေ။ မိမိ အပါအဝင်၊ မိမိမျက်စိရှေ့တွင် မိမိသားသမီးနှင့် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ ဆွေးမျိုးများ အားလုံး အသေဆိုး၊ ဘဝ ဆိုးများကို မသေမချင်း နည်းမျိုးစုံစွာ ခံစားနေကြရပါစေလို့ ကျိန်စာတိုက်လိုက်ပါတယ်။
အထိန်းသိမ်းခံ ကျောင်းသားနှစ်ဦး ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရ
ဒေါ်ခင်မျိုးသက် - နားဆင်ရန် (MP3)
လွန်ခဲ့တဲ့သုံးပတ်က အဖမ်းအဆီးခံခဲ့ရတဲ့ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကိုကျော်
ကိုကိုနဲ့ ကိုဉာဏ်လင်းအောင်တို့ကို သင်္ကြန်မတိုင်ခင် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ပထမဆုံးအကြိမ်
အဖြစ် ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကို အာဏာပိုင်တွေ ဖမ်းဆီးထားစဉ်အတွင်း ညှဉ်းပန်း
နှိပ်စက်မှုတွေ ရှိနေတာမို့ ဥပဒေကြောင်းအရ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့
သူတို့ရှေ့နေက ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဒေါ်ခင်မျိုးသက်က တင်ပြပေးထားပါ
စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်က မဟာဘွဲ့ယူဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ ကျောင်းသား ကိုကျော်ကို
ကိုနဲ့ ကိုဉာဏ်လင်းအောင်တို့ကို ဗွီဒီယိုအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၂(က)(ခ) တို့နဲ့ တရားစွဲဆို
ထားပေမယ့် အမှုခိုင်လုံမှုမရှိဘူးလို့ သူတို့အမှုကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့
လူငယ်ရှေ့နေ ကိုဖိုးဖြူက ပြောပါတယ်။
“ဗွီဒီယိုအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၂(က)(ခ) နဲ့ တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဗွီဒီယိုဆင်ဆာ
ဘုတ်အဖွဲ့က ခွင့်ပြုထားတဲ့ လက်မှတ်မပါတဲ့ ဗွီဒီယိုခွေတွေကို ဖြန့်ချိမှ၊ ထုတ်ဝေမှ၊
ဝေငှမှ ပြစ်ဒဏ်ချလို့ရတဲ့ ပြစ်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အခု အမှုတွဲပေါ်ပေါက်ချက်အရဆိုရင် ကျော်ကိုကိုတို့ဟာ ဒါကို ဝေငှနေတာ၊ ထုတ်ဝေနေတာ၊ ဖြန့်ချိနေတာ၊ သူများတပါးကို ကူးယူနေတဲ့အနေအထားမျိုး မပေါ်ပေါက်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီပြစ်မှုပုဒ်မတွေနဲ့
ကျော်ကိုကိုဟာ သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ ဥပဒေကြောင်းအရ ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။”
ကိုဖိုးဖြူ ရှင်းပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဗွီဒီယိုပုဒ်မဟာ ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ်အထိ အပြစ်ပေးနိုင်တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
အခု အမှုမခိုင်လုံပေမယ့် မရမ်းကုန်းရဲစခန်းက တရားစွဲဆို အမှုဖွင့်ခဲ့တဲ့အတွက် သူတို့
ဟာ မရမ်းကုန်းတရားရုံးမှာ အမှုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ တရားစွဲဆို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် အတွင်းမှာလည်း ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရမှုတွေ တွေ့နေရတယ်လို့ ရှေ့နေကိုဖိုးဖြူက
“ကျော်ကိုကိုတို့ထွက်လာတဲ့အခါမှာ ခြေထောက်တွေ ယိုင်နေတယ်။ ကောင်းကောင်း လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပြီး အမှုသည်ဆီကနေ ရှေ့နေရဲ့ instruction လိုက်တောင်းတဲ့အခါကြတော့ သူတို့တွေ အနှိပ်စက်ခံရတယ်။ ဒါကြောင့် ဒူးတွေချောင်
နေတယ်။ နာလည်းနာနေတယ်။ ခြေထောက်တွေလည်း လှမ်းလို့မရဘူး။ ဘာဖြစ်လို့
လဲဆိုတော့ ခြေမလေးနဲ့ထောက်ပြီး အနှိပ်စက်ခံထားရတယ်လို့ သိရပါတယ်။”
ရှေ့နေတယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်အမှုသည် ဒီလိုမျိုး အနှိပ်စက်ခံရတာကို ဘယ်လိုများ အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလဲ။
“ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ ဆိုတာရှိတယ်။ ရဲ
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေဆိုတာ ထွက်ထားသလို ရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး နည်းဥပဒေလည်းရှိတယ်။ ရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေမှာဆိုရင် အမှုသည်ဖြစ်သူ၊
ဒါမှမဟုတ် စွပ်စွဲခံရသူကို စစ်ဆေးမေးမြန်းတဲ့အခါ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းမလုပ်ရဘူး၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း မပြုလုပ်ရဘူး၊ တစုံတရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ထိခိုက်
နစ်နာအောင် မပြုလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့ ပြဆိုချက်တွေရှိတယ်။ အဲလိုပြဆိုချက်တွေ ရှိရုံတင်
မကဘူး၊ Law enforcement officials တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ conduct ဆိုပြီး UN က
ချမှတ်ထားတဲ့ နည်းဥပဒေတွေလည်းရှိတယ်။ အဲဒီမှာလည်း အခုလို Physical, Mental
torture တွေမလုပ်ရဘူးလို့ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေရှိတယ်။
“ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေကြောင်းအရ ဆက်လက်လျှောက်ထားပြီး ဆောင်ရွက်သွားမှာ
ဖြစ်တယ်။ ပြဌာန်းချက်တွေ ရှိရုံနဲ့မပြီးပါဘူး၊ ဒါတွေကို အရေးတယူနဲ့ ကျင့်သုံးဆောင်
ရွက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှသာလျှင် ဥပဒေဟာ အသက်
၀င်လာမှာဖြစ်တယ်၊ အတည်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်၊ ပြည်သူကြားမှာ ပျံ့နှံ့လာမှာ
ဖြစ်တယ်။ ဒါမျိုး နှိပ်စက်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့ အလေ့အထတွေ၊ အလေ့အကျင့်တွေ ရပ်စဲ
သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက်ကြောင့် ဥပဒေကြောင်းအရပဲ ဆက်လက်ရင်ဆိုင်
ကိုကျော်ကိုကိုတို့ရဲ့အမှုကို သင်္ကြန်အပြီး ဧပြီ ၂၂ ရက်မှာ ဆက်ပြီး ကြားနာစစ်ဆေးဖို့ ရုံးချိန်းပေးထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
Posted by ကိုထိုက် at 02:12
စုတ်ပြတ်သတ်နေတာပဲ..အစိုးရလို့ရော ခေါ်နိုင်သေးလား ဖက်ဆစ်အမွေဆိုးတွေကို ရှင်သန်အောင်လုပ်နေတာ လက်ရှိစစ်အာဏာရှင်အစိုးရသာဖြစ်တယ်။ လူမဆန် မေတ္တာတရားခေါင်းပါးတဲ့ သခင်အားရ ကျွန်ပါးဝ ကောင်တွေ အသေဆိုးနဲ့ သေပါစေ.
How heartless they are??
紅櫻桃愛情小說豆豆聊天室尋夢園聊天室j2h搞笑街舞遊戲館情色自拍電影聊天室尋夢園嘟嘟圖片區免費視訊成人聊天室ut聊天室90691聊天室找一夜ut聊天室正妹牆 - 美女相簿蒐秘免費自拍情色電影飯島愛免費影片成人 貼圖視訊交友網90739麗的免費情色遊戲愛情公寓 - I Part洪爺 影城Hotsee 免費視訊 聊天室醫生迷姦自拍影片分享HotGoo 影片大眾論壇援交友聊天室洪爺色情網站彰化人聊天室二色情影片觀賞麗的情色小遊戲色情小遊戲癡漢成人論壇哈雷影音視訊聊天室愛情小語- 成人交友聊天a片下載台灣美女貼圖區sex貼片區GoGo2sex - 亞洲東洋線上成人影片GoGoBox論壇gogo2sex 免費a片一葉晴貼影片區go2av.com 免費影片摯愛中年聊天室自拍情色貼圖Girl5320貼片貼圖區臺灣情色自拍貼圖網自拍偷窺貼圖區小瓢蟲情色論壇免費自拍情色小電影gba遊戲下載區寄情築園動畫小遊戲區粉紅豆豆聊天室foxy免費音樂下載情色典慾長全國免費視訊風之動漫論壇日本無碼a片下載friendster交友社群部落免費電影線上看無料遊戲網免費a片下載免費影音視訊聊天成人情色自拍貼圖aaa片免費看